Verizon ကမက်ဆေ့ခ်ျများ | အန်းဒရွိုက်သည် APK ကိုဒေါင်းလုပ် (နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း)
ပင်မစာမျက်နှာ » ဆက်သွယ်ရေး Apps ကပ » Verizon ကစာတိုက်
Verizon ကမက်ဆေ့ခ်ျများ APK ကို
ထပ်တူပြုခြင်းသည်သင်၏စမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်, ကွန်ပြူတာနှင့်ပင်စမတ်နာရီ feature Verizon ကမက်ဆေ့ခ်ျကို အသုံးပြု. ချိတ်ဆက်နေပါ။ သငျသညျ devices များအကြားပြောင်းနေသည့်အခါပင်ကိုသွားစကားဝိုင်းမှာထားပါ။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်စုချတ်, စာသားများ, ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများနှင့် Starbucks က, အမေဇုန်လိုစတိုးဆိုင်များမှာအထိ $ 100 တန်ဖိုးရှိလက်ဆောင်ကတ်များမှတစ်ဆင့်မိသားစု, သူငယ်ချင်းအသင်းဖော်များနှင့်ထို့ထက် ပို. နှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါနှင့်ပိုပြီး။
အခုတော့သူမည်သူမဆိုကို download လုပ်ပါနဲ့ Verizon မက်ဆေ့ခ်ျများ, ပင်မဟုတ်သော Verizon ကဖောက်သည်များ (သဟဇာတကိရိယာများပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်) နဲ့ chat လို့ရပါတယ်။
သစ် Group မှချတ် - လူတွေ 250 မှတက်နှင့်အတူပိုကြီးတဲ့အုပ်စုချတ်ကိုဖန်တီးပါ။ စက္ကန့်အတွင်းဓါတ်ပုံ / ဗီဒီယို Send နှင့်လက်ခံရရှိသည်။ ကိုယ်စားပြုပုံ, နောက်ခံနှင့်ပိုပြီးနှင့်အတူသင်၏ချတ်အတွေ့အကြုံကိုမိမိစိတ်ကြိုက်။ သင်ပင်စကားပြောအသံပိတ်သို့မဟုတ် add သို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ခုသို့မဟုတ်အုပ်စုအသစ်ဖန်တီးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲဖယ်ရှားနိုင်သည်။
NEW Yelp ပေါင်းစည်းရေး - ထိုပေါင်း menu ကိုထိပုတ်ပါနဲ့အလွယ်တကူ app ကိုအတွင်းကနေကို Yelp ရယူသုံးပါ။ စားသောက်ဆိုင်, ဖျော်ဖြေရေး, လမ်းညွန်များအတွက်ရှာဖွေသည်။ အစီအစဉ်များ Make အပေါင်းတို့နှင့်တကွသင်၏ချတ်အတွင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်မျှဝေပါ။
NEW Kanvas အပ်ဒိတ်များ - ဖန်တီး. ပေးပို့ထုံးစံ GIF များနှင့်လွယ်ကူစွာစတစ်ကာများ, စာသား, ကောက်ကြောင်းသရုပ်ပုံဖော်ခြင်းနှင့်ပိုပြီးနှင့်အတူဓါတ်ပုံတည်းဖြတ်နိုင်သည်။ အဆိုပါပေါင်း Menu ထဲမှာ app ထဲမှာကင်မရာမှတစ်ဆင့် Access ကို။
သင့်တည်နေရာကိုမျှဝေပါ - Glympse ™သင်မသတ်မှတ်အချိန်အရှည်အဘို့ရှေးခယျြလူတို့နှင့်အတူသင့်တည်နေရာကိုဝေမျှပေးနိုင်ပါတယ်။ တက်တွေ့ဆုံ, ဒါမှမဟုတ်လူတွေကိုသင်နှောင်းပိုင်းတွင်အပြေးနေအသိပေးဘို့ပြီးပြည့်စုံသော။
တစ်ဦး eGift Send - ထိုပေါင်း menu ကိုထိပုတ်ပါနှင့် eGifts အိုင်ကွန်ကိုရွေးပါ။ အလွယ်တကူလက်ျာဘက် eGifting 30 အမှတ်တံဆိပ်ထက်ပိုထံမှ eGift ကတ်များထည့်သွင်းရန်ချဲ့ထွင်ထားပြီးစာသားမက်ဆေ့ခ်ျမှတဆင့်အနေနဲ့ eGift ကဒ်ကိုပို့
devices တွေကိုဖြတ်ပြီး Sync ကို - အားလုံးသင့်ရဲ့ Device များပေါ်တွင် Verizon ကမက်ဆေ့ခ်ျကို Download လုပ်ပါ, သင်၏စမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်နှင့်ကွန်ပျူတာကိုဖြတ်ပြီးထပ်တူပြုခြင်းမက်ဆေ့ခ်ျ။ သင်အလိုရှိအခါတိုင်း device များသို့ပြောင်းပါ။ ဘယ်နေရာမှာမဆိုသင့်တက်ဘလက်နှင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ပါ။
Mode ကိုကားမောင်း - သင်ကလမ်းအပေါ်အာရုံရကြပါဘူးဒါကြောင့်တစ်ဦး auto-စာပြန်ရန် Message ပေးပို့နှင့်ဝင်လာသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုအသိပေးချက်များကို disable လုပ်ဖို့ mode ကိုကားမောင်းတွင်ဖွင့်။
HD ကိုအသံနှင့်ဗီဒီယိုတောင်းဆို - အရည်အချင်းများစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသက်ဆိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့တက်ဘလက်သို့မဟုတ်သဟဇာတစမတ်လက်ပတ်နာရီပေါ်မှ Verizon ကမက်ဆေ့ခ်ျများ app ကိုရန်သင့်ဖုန်းနံပါတ်သို့လင့်ထားသည်နှင့်အောင်သူတို့ (ဆယ်လူလာသို့မဟုတ် Wi-Fi ကို) မဆို network ပေါ်မှာချင်နေရာတိုင်းမှာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုလက်ခံရရှိသည်။
ဇယားမက်ဆေ့ခ်ျများသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုပိတ်ထားရင်တောင်တိကျတဲ့နေ့စွဲ / အချိန်ကကယ်နှုတ်ခံရဖို့။
Yahoo ကရှာဖွေရေးနှင့်သင်၏ချက်တင်ထဲမှာထည့်သွင်းရန်ပုံရိပ်တွေနဲ့ GIF များအဘို့ဝဘ်တွင်ရှာပါ။
သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်း, သဟဇာတစမတ်လက်ပတ်နာရီ, ကို iOS device ကို, တက်ဘလက်, PC ကို, MAC နှင့်ဝက်ဘ် browser.Need အကူအညီကနေ Wi-Fi ကိုကျော်မက်ဆေ့ခ်ျပို့ပါ, လက်ခံ? မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ပံ့စာမျက်နှာများသွားရောက်ကြည့်ရှု
မှာပြီးပြည့်စုံသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ & အခြေအနေများ View:
မှာ Verizon ကမက်ဆေ့ခ်ျများ privacy ကိုမူဝါဒအ View:
67.40 ကို MB
Verizon က - VZ